China Sensor Thermopile tsy misy fangarony avo lenta ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy hafanana tsy mifandray STP9CF55H | Masoandro
Sensor Thermopile tsy mitongilana avo lenta ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray STP9CF55H
Ny sensor STP9CF55H thermopile infrared (IR) ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandraika dia sensor IR thermopile izay manana voltage signal output dia mifanaraka amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Miaraka amin'ny toetran'ny valinteny haingana, ny habeny ary ny fahamendrehana avo lenta, ary misy puce thermistor avo lenta tafiditra ao anaty akorany fonosana, izay afaka manonitra ny mari-pana manodidina ary tsy mila manamboatra ny NTC. Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, ny sensor dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana ary be mpampiasa amin'ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny vatana.
Ny sensor thermopile infrared STP9CF55H ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy contacet dia sensor thermopile
famolavolana fanelingelenana anti-elektromagnetika, STP9CF55H dia matanjaka ho an'ny tontolo tontolo fampiharana rehetra.
Ny STP9CF55H misy karazan-tsivana sensor thermopile mifanaraka CMOS dia misy fahatsapana tsara,
coefficient hafanana kely ny fahatsapana ary koa ny reproducibility avo sy azo itokisana. Famerana avo lenta
thermistor referansa puce dia natambatra ihany koa ho an'ny onitra ambient mari-pana.
Ny sensor infrareda avo lenta an'ny STP9CF55H dia 0.05 ℃ ny refin'ny mari-pana. (Ny mari-pahaizana momba ny fandrefesana ny mari-pana ara-pahasalamana dia matetika ihany no ilaina 0.2 0.2 ℃). Izy io dia manana teknolojia patanty sy fampandrosoana tsy miankina, ary ny mari-pahaizana momba ny maripana momba ny tontolo iainana amin'ny sensor dia mihoatra ny 15 heny noho ny vokatra avy any ivelany (nitombo hatramin'ny 3% na 5% ka hatramin'ny 0,2%).
Ny sensor dia manana sakany fampiharana marobe, be mpampiasa amin'ny fandrefesana ny mari-pana tsy ifandraisana, ny thermometre amin'ny sofina, ny thermométer de laon, ny fifehezana ny mari-pana mitohy, ny fampiharana ny mpanjifa ary ny fandrefesana ny maripana ao an-tokantrano.
Pyrometrière, thermométeran'ny loha, thermométeran'ny sofina, thermométer tanana
Teo aloha: Infrared Thermopile Sensor for contactless Temperature Measurement STP9CF55
Manaraka: IR Thermopile Sensor ho an'ny fitiliana ny mari-pana amin'ny vatana STP9CF55C
Thermopile avo lenta tsy misy ifandraisany amin'ny Infrared S ...
Temperature tsy misy fifandraisany amin'ny refy fandrefesana ...